Nezvedu - Guanghan N&D Carbide Co Ltd.
ND carbide inogadzira ese emhando maitiro senge ISO uye API standard
Yakagadzwa muna 2004, Guanghan N&D Carbide Co Ltd ndeimwe yevanokurumidza kukura uye vanotungamira vagadziri muChina vanoshanda zvakanyanya nesamende tungsten carbide. Isu tinogadzira mukugadzira akasiyana siyana ekupfeka chikamu chemafuta & gasi kuchera, kuyerera kudzora uye kucheka indasitiri.
Zvishandiso zvemazuva ano, vashandi vanokurudzirwa, uye yakasarudzika yekugadzira kugona inoguma nemitengo yakaderera uye ipfupi nguva yekutungamira ichibvumira ND kuti ipe vatengi vayo basa rakakosha uye kukosha.
Kubva pakusarudzwa kweprimiyamu mbichana kusvika kune ekupedzisa ekupedzisa uye kupukuta kwezvikamu zvakaoma, ND inoita matanho ese enhanho mufekitori yega. ND Carbide inopawo yakazara yakazara mamaki e carbide mune ese cobalt uye nickel binders. Izvi zvinosanganisira mamakisi-ezviyo mamakisi ezvishandiso zvinoda musanganiswa wakasarudzika wekupfeka kuramba uye kusimba kwesimba, kuomarara kwekushandisa munzvimbo dzinokanganisa zvakanyanya, uye yakakwira cobalt bhaidhi mamakisi ekugadzira zvishandiso zvekushandisa zvinoda kuomarara kwakasimba uye simba rekukanganisa.
ND Carbide inogadzira ese carbide akafukidzwa nemaindasitiri zviyero pamwe neyakajairwa mamaki kusangana nezvinodiwa zvevatengi. Izvo zvakaomeswa carbide zvinhu zvinowanikwa kungave sememi-apedza zviya kana seakatsetseka-machina zvikamu.
Kufambira mberi muzvipfeko zvekugadzirwa kuri kugadzirirwa zvishandiso nhasi zvinoda mhinduro nyowani, ND carbide inokupa iwe izvo zvigadzirwa kuti usangane nematambudziko iwayo.
Inotarisa uye inoenderera
Basa kune vanhu, nzanga uye nharaunda
Nhasi, "mubatanidzwa wemagariro mutoro" wave musoro unonyanya kupisa munyika. Kubva pakagadzwa kambani iyi mu2004, iro basa kuvanhu uye nharaunda rakagara richiita chinonyanya kukosha basa reN ND Alloy, iyo yagara iri chinetso chikuru cheiye muvambi wekambani.
Wese munhu akakosha
Simbisa basa / kudzidza kweupenyu hwese / mhuri uye basa / hutano kusvika pamudyandigere. Pa ND, isu tinotarisisa vanhu. Vashandi vanotiita kambani yakasimba, uye tinoremekedza, tinokoshesa uye tinoshivirirana. Chete pane hwaro uhwu ndipo patinogona kuwana yedu yakasarudzika yevatengi tarisiro uye kukura kwekambani
Charity kudengenyeka kwenyika kudonhedza / mupiro wezvidziviriro zvinhu / mabasa erudo
ND inogara iine mutoro wakafanana pamusoro pekunetseka kwenzanga. Isu tinotora chikamu mukuderedza hurombo munharaunda. Zvekusimudzira nzanga nekusimudzira kwebhizimusi pacharo, isu tinofanirwa kutarisisa zvakanyanya kupedza hurombo uye zvirinani titore basa rekudzora hurombo.